"Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo" waa farriinta soo dhaweynta ee ka socota Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Koonfurta Kuuriya | Waxaan ka socdaa mac
"Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo" waa fariin soo dhaweyn ah oo ka socota Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Koonfurta Kuuriya
Javier Porcar | | Apple Store, Noticias, dhowr
Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Kuuriyada Koofureed weli ma furmin, laakiin muwaadiniinta ka soo gudbaya albaabadooda waxay helayaan ecalaamadda caadiga ah iyo midabka midabka leh oo leh: "Wanaagsan inaan kula kulmo". Tani waa farriinta kaliya ee aan ka aqrin karno asalka cad ee daboolaya muraayadda muraayadda ee dukaanka tafaariiqda Apple. Dusha sare, waxaan ka heli karnaa astaamaha tufaaxa Apple.
Warkii ugu horreeyay ee furitaanka Dukaanka Apple ee Koonfurta Kuuriya ayaa soo shaac baxay sannad ka hor. Maahan in dukaan kale la furo. Markan waxay ku taal meel waxyar u jirta xarunta Samsung.
Ogeysiiska waxaa weheliyey goobta uu ku yaal dukaanku. Tani waxay ku yaali laheyd Garosu-gil, oo ah goob laga dukaameysto noocyada qiimaha sare, tusaale kale oo Apple ah si loo soo bandhigo wax soo saarkeeda oo tayo sare leh. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxaliga ah horraantii Diseembar, dukaanka Apple waa inuu diyaar ahaadaa maalmaha ugu dambeeya bisha. Markii la gaadhay taariikhahaas iyo isbeddelka shuqullada, suurtagalnimada ayaa meesha laga saaray. Xilligan warbaahinta kale ayaa tilmaamaysa taas furitaanka dukaanka waa dhow yahay, inkasta oo xilligan la joogo aanan garanaynin taariikhda saxda ah ee furitaanka dukaanka.
Apple waxay diirada saartay sanadkan 2018 furitaanka dukaamada wadamada Aasiya, iyadoo la tixgelinayo dhacdooyinka ka dhici doona sanadaha soo socda aaggan meeraha ah. Ku biirista dukaanka Kuuriyada Koonfureed waa ku dhawaaqida Furitaanka dukaanka Melbourne, oo ku yaal Federation Square. Tusaalaha tani wuxuu daboolayaa Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee 2018, oo lagu qaban doono Kuuriyada Koonfureed.
Laakiin Apple kuma joogsato dadaalkeeda ku aaddan furitaanka ama dib u habeynta Apple Store ee dalal kale. Furitaanka a ku kaydi Viennaiyo waliba dukaanka Arab saudí sanadka 2019. Apple uma jeedin inay ka sameysato dukaamo adduunka oo dhan iyadoon wax badan laga hayn. Ujeeddadeedu waa inay ka buuxiso waxyaabaha ay ka kooban yihiin, sida falalka tababarka ee Maanta Apple, oo cusbooneysiiya waxyaabaha ay ka kooban yihiin xilli kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » "Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo" waa fariin soo dhaweyn ah oo ka socota Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Koonfurta Kuuriya
HomePod ugu dambayntii waa la sii dayn karaa qiyaastii 4-6 toddobaad
Marka laga reebo cusbooneysiinta macOS High Sierra, Apple waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta Safari ee El Capitan iyo Sierra